Iqela lokuzisa-i-Chengdu Cast Acrylic Panel Industry Co., Ltd.
Ngombulelo kumgaqo ojolise kuluntu, sineqela elizinzileyo, uninzi lwabasebenzi basebenze kwiDuke Acrylic Sheet ngaphezulu kweshumi ukusukela oko umzi-mveliso wasungula ngo-2007.
Kuyinto eqhelekileyo ukuba izinto ezingavuthiweyo ziyimveliso ene-homogenization enzulu, kwaye iishiti ze-acrylic azikho ngaphandle. Yintoni esenza ukuba sibalasele koontanga bethu kwaye sibe luphawu oludumileyo ekuhlaleni. Sicinga ukuba eyona nto ibalulekileyo ngabantu, umqeshwa ngamnye uyenzile. Siyinkampani egcwele abasebenzi abanamava, iqela sisikhokelo sakho kumaxwebhu e-acrylic kunye nokuqamba. Ilungu ngalinye leqela liza nento entsha etafileni ngamava abo obuqu kunye nobuntu babo. Ayikuniki kuphela imveliso, kodwa kunye nezisombululo kunye nenkonzo nganye.
Ulwakhiwo lwethu ikakhulu lwahlulahlulwe lwangamacandelo amane, iqela lolawulo, iqela lemveliso, iqela lentengiso, kunye netekhnoloji yeqela le-R & D.
Iqela lolawulo lijongana nawo wonke umsebenzi wolawulo ukuqinisekisa ukusebenza kakuhle kwenkampani, kubandakanya noqeqesho kukhuseleko kunye novavanyo lwempembelelo kwindalo esingumsebenzi osisiseko nobalulekileyo womenzi. Njengenkampani encedisayo yeqela le-Monarch, sihlala sithatha uxanduva kwezentlalo kwaye sifuna uphuhliso oluzinzileyo.
Iqela lemveliso lithatha uxanduva lokuvelisa kunye nomsebenzi wokuyila. Umgaqo weqela kukuba umgangatho uveliswa, hayi ngokuhlolwa, kwaye ukuthoba umgangatho kukunciphisa indawo yethu yophuhliso. Baqhubeka nokusebenza kwinqanaba lokufumana iziqinisekiso kunye nokonga iindleko, kunye nemigangatho yeDuke.
Iqela lentengiso linamasebe amathathu, iqela lezentengiso zaphesheya, iqela lentengiso lwasekhaya kunye neqela lokuthengisa iprojekthi. Into abayenzayo kukwazisa imveliso yethu kunye nenkonzo kumthengi olungileyo, ukwandisa isabelo semarike yeDuke Acrylic kwihlabathi liphela. Umgaqo kukuba nobungcali kwaye unyanisekile, impumelelo yabathengi bethu kukubonakaliswa kwexabiso lethu.
Itekhnoloji ye-R & D liqela lethu eliphambili, inceda iqela lokuthengisa ukuba lihambise isisombululo semveliso esingcono kubathengi bethu, silungelelanise neqela lemveliso ukusombulula iingxaki zetekhnoloji yokuvelisa kunye nokuphucula iinkqubo zemveliso.
Njengoko umoya wenkampani yethu uthe umanyene, unzima kwaye ulungile. Ngamaqela ethu asebenza kakuhle, siyakholelwa ukuba asizukubakhulu kuphela kwaye somelele, kodwa siya kukhula kwaye sikhule ngokuqhubekayo ixesha elide.